क्यारिबियन क्षेत्रको विशिष्ट नृत्य: साल्सा देखि बाचाटा सम्म यात्रा समाचार
लुइस मार्टिनो | 05/05/2021 12:08 | अमेरिका, संस्कृति
क्यारेबियन क्षेत्रको विशिष्ट नृत्यहरू विगतमा तिनीहरूको जरा भए। हामी यसलाई विशाल क्षेत्र भन्छौं जसमा धेरै राष्ट्रहरूले नुहाएको धेरै राष्ट्रहरू पनि छन् क्यारिबियन सागर र एट्लान्टिक महासागरको यस भागले घेरिएका टापुहरू पनि। पहिलो हो मेक्सिको, कोलम्बिया, निकारागुवा o पनामायद्यपि उत्तरार्द्धको सम्बन्धमा हामी राष्ट्रहरू जस्तै उल्लेख गर्न सक्छौं क्युबा (यदि तपाईं यस देशको चलनहरूको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्), डोमिनिकन गणराज्य o जमाइका.
त्यसकारण, क्यारिबियन क्षेत्रको विशिष्ट नृत्यहरू ती हुन् जुन विशाल क्षेत्रहरूमा अभ्यास गरिन्छ। हाल, तिनीहरू तीन प्रभावको संश्लेषणको परिणाम हुन्: नेटिभ, स्पेनिश र अफ्रिकी, पछि आउनेहरू त्यहाँ ल्याए जसले आफ्नो गन्तव्यको रूपमा दासत्व राखेका थिए। वास्तवमा, यी धेरै नृत्यहरू दुवै दास र स्वतन्त्र कामदारहरूको कडा परिश्रमको दिनको अन्तमा मंचन गरिएको थियो। तर, थप विज्ञापन बिना, हामी तपाईंलाई यी तालहरूको बारेमा बताउन जाँदैछौं।
1 क्यारिबियन क्षेत्रको विशिष्ट नृत्य: एक विशाल विविधता
1.1 साल्सा, क्यारिबियन नृत्य पार उत्कृष्टता
1.2 मेरेन्गु, डोमिनिकन योगदान
1.3 मम्बो र यसको अफ्रिकी मूल
1.5 कम्बिया, अफ्रिकी विरासत
1.7 कम लोकप्रिय क्यारिबियन क्षेत्रको अन्य विशिष्ट नृत्य
क्यारिबियन क्षेत्रको विशिष्ट नृत्य: एक विशाल विविधता
यी नृत्यहरू बारे बाहिर खडा हुने पहिलो कुरा हो ती उपस्थितिहरूको ठूलो संख्या। उदाहरण को लागी, तथाकथित तिनीहरू कालो छन्मूल रूपमा सान्ता लुसिया टापुबाट; को पुया कोलम्बियाली, sextet वा तिनीहरू palenquero वा हो सानो ड्रम, पनामा मा जन्म। तर, यी सबै नृत्यहरूमा रोक्ने असम्भवतालाई देखते, हामी तपाईंलाई सबैभन्दा लोकप्रिय व्यक्तिहरूको बारेमा बताउन जाँदैछौं।
साल्सा, क्यारिबियन नृत्य पार उत्कृष्टता
साल्सा, क्यारेबियन क्षेत्र समान उत्कृष्टता को विशिष्ट नृत्य
चाखलाग्दो कुरा के छ भने सबै भन्दा साधारण क्यारिबियन नृत्य मा लोकप्रिय भयो न्यूयर्क पछिल्लो शताब्दी को साठ को दशक बाट। यो त्यतिखेर पोर्टो रिकन संगीतकारहरूको डोमिनिकनको नेतृत्वमा थियो जोनी पाचेको उसलाई प्रसिद्ध बनायो।
यद्यपि यसको मूल क्यारेबियन देशहरूमा फिर्ता जान्छ र विशेष रूपमा क्युबा। वास्तवमा, यसको ताल र यसको धुन दुबै देशको परम्परागत संगीतमा आधारित छ। विशेष रूपमा, यसको लयबद्ध प्याटर्न आउँदछ तिनीहरू क्युवाली छन् र मेलोडिक लिइएको थियो उनीहरु मोन्टुनो हुन्.
क्यूबालीका धेरै उपकरणहरू छन्। उदाहरण को लागी, बोंगो, प्यालाहरू, गोरो वा काउबेल जुन अरू द्वारा पूरक हुन्छन् जस्तै पियानो, तुरही र डबल बास। अन्तमा, यसको सद्भाव यूरोपियन संगीतबाट आउँदछ।
मेरेन्गु, डोमिनिकन योगदान
मेरेन्गु यसमा सबैभन्दा लोकप्रिय नृत्य हो डोमिनिकन गणराज्य। यो पनि आयो संयुक्त राज्य अमेरिका पछिल्लो शताब्दी, तर यसको उत्पत्ति उन्नीसौं मा मिति र अस्पष्ट छन्। यति धेरै कि यसका बारेमा कल्पित कथाहरू छन्।
एक प्रसिद्ध ज्ञात एक महान देशी नायक स्पेनिश बिरूद्ध लडाई मा चोट लागेको थियो। गाउँ फर्किए पछि, उसका छिमेकीहरूले उनलाई एक पार्टी फेंकने निर्णय गरे। जब तिनीहरूले येशू ल l्गडो भएको देख्नु भयो, तिनीहरूले नाच गर्दा उहाँको अनुकरण गर्ने छनौट गरे। परिणाम यो थियो कि उनीहरूले आफ्ना खुट्टा ताने र आफ्ना कुल्चेहरू सारिदिए, meringue कोरियोग्राफीको दुई विशिष्ट सुविधाहरू।
यो सत्य हो कि हुँदैन, यो एक सुन्दर कथा छ। तर तथ्य यो हो कि यस नृत्य विश्वमा सबैभन्दा लोकप्रिय भएको छ, औंल्याइयो कि यो घोषणा गरिएको छ मानवता को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत युनेस्को द्वारा
सायद अझ वास्तविक परम्परा हो जुन यसको उत्पत्ति यस क्षेत्रका किसानहरूमा पर्छ सिबाओ कि तिनीहरूले शहरहरु मा आफ्नो उत्पादनहरु बेच्दै थिए। उनीहरू लजिंगमै बसे र उनीहरूमध्ये एकलाई पेरिको रिपाओ भनियो। त्यहीं तिनीहरूले यस नृत्य प्रदर्शन गरेर आफैंको मनोरन्जन गरे। त्यसकारण यो समय र क्षेत्र ठीक भनिन्छ पेरिको रिपाओ.
उसको संगीतको लागि, यो तीन उपकरणहरूमा आधारित छ: एकॉर्डियन, güira र tambora। अन्तमा, यो पनि जिज्ञासु छ कि meringue को सुधार र विकासको लागि जिम्मेवार मुख्य व्यक्ति तानाशाह थियो। राफेल लियोनिडास Trujillo, यसका सबै प्रशंसकहरू हुन् जसले यसलाई बढावा दिन स्कूल र अर्केस्ट्रा बनाए।
मम्बो र यसको अफ्रिकी मूल
क्यारिबियन क्षेत्रको विशिष्ट नृत्यहरू मध्ये यो विकास गरिएको थियो क्युबा। यद्यपि यसको मूल श्रेय यस टापुमा आएका अफ्रिकी दासहरूलाई दिइएको छ। जे भए पनि यस नृत्यको आधुनिक संस्करणका कारण हो अर्कासियो अर्केस्ट्रा पछिल्लो शताब्दीको तीसौं मा।
लिदै क्युबा डेन्जान, यसको स्पीड बढाउनुभयो र शैलीका तत्वहरू थप्दै क्रमबद्धतामा सिन्कोपेशन ल्याउनुभयो मोन्टुनो। जे होस्, यो मेक्सिकन हुनेछ दमासो पेरेज प्राडो जो संसारभर मा mambo लोकप्रिय हुनेछ। उनले अर्केस्ट्रामा खेलाडीहरूको स expand्ख्या विस्तार गरेर र ट्रम्पिक, सेक्सोफोन, र डबल बास जस्तो विशिष्ट उत्तर अमेरिकी जाज तत्वहरू थपेर यो गरे।
विशेषता पनि विचित्र बनायो काउन्टरपोइन्ट त्यसले शरीरलाई यसको बीटमा सार्यो। पहिले नै बीसौं शताब्दीको पचासको दशकमा, धेरै संगीतकारहरूले माम्बोमा हस्तान्तरण गरे न्यूयर्क यसलाई सत्य अन्तर्राष्ट्रिय घटना बनाउँदै।
मा पनि जन्म क्युबायसको उत्पत्ति ठ्याक्कै माम्बो प्रभावमा फेला पार्न सकिन्छ। त्यहाँ नृत्यकर्मीहरू थिए जो पेरेज प्राडो द्वारा प्रसारित गरिएको नृत्यको उन्माद तालसँग सहज थिएनन्। त्यसोभए उनीहरूले शान्तिको लागि खोजी गरे र यो कसरी हो चा-चामा यसको शान्त टेम्पो र आकर्षक धुनहरूको साथ।
विशेष रूपमा, यसको निर्माण प्रख्यात भायोलिन वादक र रचनाकारलाई श्रेय दिईन्छ एन्रिक जोरोन, जसले सम्पूर्ण आर्केस्ट्रा द्वारा वा एकल एकल गायक द्वारा गरिएको गीतको महत्त्वलाई पनि प्रमोट गर्‍यो।
विज्ञहरूका अनुसार यस संगीतले मूलका जरालाई जोड्दछ क्युबा डेन्जान र आफ्नो आफ्नै mambo, तर यसले यसको मधुर र लयबद्ध अवधारणालाई बदल्छ। थप रूपमा, यसले तत्वको परिचय दिन्छ schottische म्याड्रिड बाट। नृत्य आफैंमा, यो भनिन्छ कि यो समूहले बनाएको हो कि यसलाई हभानाको सिल्वर स्टार क्लबमा कोरियोग्राफ गरिएको थियो। उसको खुट्टाले जमिनमा आवाज बनायो जुन तीन लगातार वारहरू जस्तो देखिन्थ्यो। र एक onomatopoeia प्रयोग गरेर, तिनीहरूले विधा बप्तिस्मा "चा चा चा".
कम्बिया, अफ्रिकी विरासत
अघिल्लो भन्दा फरक, cumbia को उत्तराधिकारी मानिन्छ अफ्रिकी नृत्य जसले अमेरिकालाई दास बनाएर लगेका थिए। यद्यपि यसमा नेटिभ र स्पेनिश तत्वहरू पनि छन्।
यद्यपि आज यो विश्वभर नाचिएको छ र अर्जेन्टिना, चिली, मेक्सिकन र कोस्टा रिकन कम्बियाको पनि चर्चा छ, यस नृत्यको उत्पत्ति क्षेत्रको इलाकामा खोज्नुपर्नेछ। कोलम्बिया र पनामा.
हामीले कुरा गरिरहेका संश्लेषणको परिणाम स्वरूप ड्रमहरू तिनीहरूका अफ्रिकी सब्सट्रेटबाट आउँदछन्, जबकि अन्य उपकरणहरू माराकास, पिटोस र गौच तिनीहरू अमेरिकाका आदिवासी हुन्। यसको सट्टामा, नर्तकहरूले लगाउने लुगा पुरानो स्पेनिश प्रकारको वार्डरोबबाट आएको हो।
तर के हामीलाई यस लेखमा सबैभन्दा चासो छ, जो यस्तो नृत्य हो, एक वास्तविक अफ्रिकी मूल हो। यसले कामुकता र नृत्यहरूको सामान्य कोरियोग्राफी प्रस्तुत गर्दछ जुन आज पनि हृदयको मध्यमा फेला पार्न सकिन्छ अफ्रिका.
यो पनि वास्तविक नृत्य हो डोमिनिकन तर सम्पूर्ण संसारमा विस्तार भयो। यो बीसौं शताब्दीको साठको दशकमा शुरु भयो लयबद्ध बोलेरोयद्यपि यसले प्रभाव पनि प्रस्तुत गर्दछ मिरेन्गु र तिनीहरू क्युवाली छन्.
थप रूपमा, बच्चातका लागि ती लयहरूका केही विशिष्ट उपकरणहरू प्रतिस्थापन गरिएको थियो। उदाहरणका लागि, बोलेरोको माराकाहरू प्रतिस्थापन गरियो güira, भी टक्कर परिवार को सम्बन्धित, र परिचय थियो गितारहरू.
अरू धेरै नृत्यहरूसँगै भए पनि यसका शुरुमा सबैभन्दा बढी नम्र वर्गको नृत्यका रूपमा बाचातालाई मानिन्थ्यो। त्यसपछि यो के रूप मा परिचित थियो "कटु संगीत", जसले ती विषयहरूमा प्रतिबिम्बित विकृति को संदर्भ बनायो। यो पहिले नै बीसौं शताब्दीको अस्सीमा थियो जब यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलियो जब सम्म कि यसलाई युनेस्कोले वर्गीकृत नगरेसम्म मानवता को अमूर्त विरासत.
अर्कोतर्फ, यसको ईतिहास भरमा, बचेता दुईवटा उपखण्डमा विभाजन भएको छ। को tecnoamargue ती मध्ये एक थियो। यसले अन्य नृत्यहरू जस्तै मर्ज गर्दा इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूबाट सिर्जना गरिएको संगीतको साथ यस नृत्यको विशेषताहरू संयोजन गर्दछ ज्याज वा रक। उनको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता थियो सोनिया सिल्वेस्ट्रे.
दोस्रो सबजेनर तथाकथित हो गुलाबी बचता, जसले विश्वभर मा धेरै लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ। हामी तपाईंलाई यो भन्न पर्याप्त छ कि उहाँको महान व्यक्तित्वहरू छन् भिक्टर भिक्टर र सबैभन्दा माथि, जुआन लुइस गुएरा ताकि तपाईले यसलाई महसुस गर्नुहुनेछ। यस अवस्थामा, यो संगै जोडिएको छ रोमान्टिक गाथा.
वर्तमानमा विधाको बारेमा, यसको सबैभन्दा ठूलो अभिव्यक्ति डोमिनिकन मूलको अमेरिकी गायक हो रोमियो सान्टोस, पहिले तपाईंको समूहको साथ, साहसिक, र अब एकल।
कम लोकप्रिय क्यारिबियन क्षेत्रको अन्य विशिष्ट नृत्य
हामीले तपाईंलाई अहिलेसम्म भनेका नाचहरू क्यारेबियनको विशिष्ट छन्, तर उनीहरूले यसको क्षेत्र पार गर्यो र विश्वभर प्रसिद्ध भयो। यद्यपि त्यहाँ अन्य नृत्यहरू छन् जुन विदेशमा सफल भएको छैन, तर क्यारेबियन क्षेत्रमा अत्यन्त लोकप्रिय छ।
यो कुरा हो संयुक्त, जसको उत्पत्ति क्षेत्र मा निहित कोलम्बिया स्पेनिश को आगमन अघि यसले नेटिभ पाइपर्सका प्रभावहरूलाई अफ्रिकी लयहरूसँग जोड्छ र यसमा स्पष्ट मोहक घटक हुन्छ। हाल यो एक बलरूम नृत्य हो जसमा लिल्टि and र उत्सवको ताल हुन्छ। यो नृत्य गर्न, तिनीहरू सामान्यतया लिन्छन् विशिष्ट कोलम्बियन वेशभूषा। यस प्रकारको नृत्यसँग सम्बन्धित छ Fandango, जुन यसको स्प्यानिश नेमसेकसँग केहि गर्न सक्दैन। मूल रूपमा बोलिभियन शहरबाट Sucre, चाँडै फैलियो कोलम्बियन उराबा। यो खुशीको कोरिडो हो जसमा जिज्ञासुताका साथ महिलाहरूले पुरुषहरूको कुकर्मलाई अस्वीकार गर्न मोमबत्तीहरू बोक्दछन्।
स्पष्ट अफ्रिकी मूलहरूसँग mapalé। यस नृत्यमा, यो ड्रम र कलर जसले ताल सेट गर्दछ। यसको उत्पत्तिसँग काम गर्नुपर्‍यो, तर आज यसमा एक निर्विवाद उत्सव स्वर छ। यो एक ऊर्जावान र जीवन्त नृत्य हो, विदेशी मा पूर्ण।
अन्तमा, हामी तपाईंलाई यसको बारेमा बताउनेछौं बुलेरेन्गु। क्यारिबियन क्षेत्रका अन्य विशिष्ट नृत्यहरू जस्तै यसमा नृत्य, गीत र मधुर व्याख्या समावेश छ। पछिल्लो ड्रम र हातको हत्केला द्वारा मात्र गरिन्छ। यसको अंशको लागि, गीत सँधै महिलाहरू द्वारा प्रस्तुत गरिन्छ र नृत्य दुबै जोडी र समूहहरू द्वारा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ।
अन्तमा, हामीले तपाईंलाई क्यारेबियनमा सबैभन्दा लोकप्रिय नृत्यहरूको बारेमा बतायौं। हामीले तपाईंलाई उल्लेख गरेको पहिलो व्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति र लोकप्रियता प्राप्त गरे। तिनीहरूको पक्षका लागि, उत्तरार्द्धहरू उनीहरूको प्रदर्शन गरिएको इलाकामा समान रूपमा परिचित छन्, तर बाँकी संसारमा त्यत्ति कम। जे भए पनि, त्यहाँ अरु धेरै छन् क्यारिबियन क्षेत्र को विशिष्ट नृत्य। ती मध्ये, हामी पास गर्न मा उल्लेख गर्नेछौं farotas, the लिपिबद्ध, स्पेनिश, वा द्वारा अमेरिका ल्याइएको म हुनेछ मलाई थाहा छ - मलाई थाहा छ.
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » संस्कृति » क्यारिबियन क्षेत्रको विशिष्ट नृत्य